Oogqirha beziko lePerinatal
Maternity Ndifuna umntwana
Isikhungo sokubeleka sisifo senkonzo yezonyango apho baxoxisana nabo, baphathwe, bajonge ukukhulelwa, baphathe ukuhanjiswa, kunye nokubuyiswa komntwana emva kokubeletha kwabasetyhini kunye nabantwana abatsha. Zizo ezi ziziko ezibandakanyekayo ekulawuleni ukukhulelwa nokubeletha, kunye noongikazi lweintsana ezingekafiki. Ukongezelela koko, ngaba oogqirha beziko lokubeleka kwabasebenzi abasebenza kwionyango zonke iintlobo zokungabikho kwengqondo, ngokuqhelekileyo basebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zobuchwepheshe bokuzala.
Kutheni sifuna amaziko okubeleka?
Uhlobo olunjalo lwamaziko ogqirha lwenza oku:
Ukunikezela ngcebiso, ukuxilonga, unyango kunye nokuvuselela uncedo ngokubhekiselele kwindoda ekhuselekileyo yowesifazane okhulelweyo, abafazi abahamba phambili, i-puerperas, iintsana, kunye nabasetyhini abangasebenzi ngokuzala.
Ukusebenzisana kwamaziko okukhusela kunye nokukhusela abantwana, kwaye, ukuba kuyimfuneko, enye imibutho yezempilo.
Ukubeka esweni ngokukhawuleza kwimeko yabasetyhini abakhulelweyo, abafazi abasetyhini, i-puerperas kunye neentsana ezifuna iintsholongwane ezinzulu, ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwexesha elizodwa, unyango lwezonyango phambi kweengxaki.
Iqhuba uvavanyo lwekliniki kunye novavanyo lobuchule bolondolozo lwonyango lwabasetyhini nabantwana abancinci, ukuqokelela kunye nendlela yokwenziwa kwedatha kwimiphumo yabantwana abasanda kuzalwa kunye neentsholongwane ezahlukeneyo.
Unika inkqubo yeenkqubo zokuvuselela nokulungisa unyango, unyango kunye neengqondo kunye noloncedo lwasemthethweni kwabasetyhini nabantwana abancinci.
Ziziphi iingcali ezisebenza kwiziko lokubeleka?
Kulo phantse naluphina isikhungo esibhekele phambili, inani elikhulu kakhulu lenziwe ngabagqithisi kunye nabafazi. Ngubo bajonga abafazi abakhulelwe, benze iimviwo zengqondo ngezihlandlo , bacebise abafazi kwiingxaki ezinxulumene ngqo nokucwangcisa intsapho.
Ukuba sithetha ngabo bonke oogqirha beziko lokubeleka, igama lobugcisa liza kuba uluhlu olujonge into enje:
Ngoko ke, oogqirha beSebe le-ultrasound yeziko lokubeleka, abahlala behlangene kunye nabasebenzi beSebe lokubeletha, baxilongwa kwiimeko ezikhoyo xa bebona ukukhulelwa, kunye nokukhusela izifo ezinsana ezizalwe kwihlabathi.
Oogqirha-neonatologists abasebenza kwiziko lokubeleka baqhuba ukongika kweintsana ezingaphambi kwexesha kunye nokubeka iliso kwi-intlalo yabo kunye nophuhliso.
Teratozoospermia kunye nokukhulelwa
Indlela yokulungiselela ukukhulelwa emva kwe-30?
IiVithamini zoCwangciso loKhulelwa
Ubudala bokuzala abantwana
Ndiyakwazi nini ukufumana ubulili bomntwana?
Imiqondiso yokukhulelwa njengenkwenkwana
Ngolunye usuku emva kokuya kwelanga kwenzeka i-ovulation?
Indlela yokuzala umntwana onempilo?
Ukulinda i-ECO Quota
IiVithamini zamadoda ekucwangciseni ukukhulelwa
Ukufakwa kweMnyama - iingcamango eziyingqayizivele zengaphakathi elihle
Indlela yokukhetha ikhamera yesibuko - iingcebiso ezilula kubaqalayo
I-Eustoma - ikhula kwimbewu ekhaya
I-Aquapark "Isiqithi sase-Miracle", iKursk
Yintoni eluncedo kwi-orange?
Amakhethini e-Glass kwindawo yokuhlambela
Imifanekiso yamatena eMhlophe
Zingaphi abantwana baseMantou?
Utywala kunye nabantwana
I-Fortune-tell on candles
Izitayela zokuyila umtshato - iindlela zonyaka we-2015
I-Slobber kwintsana ezinyangeni ezintathu
Imibala yeenwele 2016
Unokufumana njani umntu kumnxeba?
Isonka esivela kumgubo wengqolowa opheleleyo kwisonka sezonka
Yintoni enokuyenza kwi-Intanethi?
U-Lady Gaga wabelane nabalandeli ngamava ukuba uya kulawula njani intlungu nge lupus